Wasiirka cadaaladda Soomaaliya oo kulamo ka wada Waajid + Sawirro | Wardeeq 24 TV
Home Warar-ka Wasiirka cadaaladda Soomaaliya oo kulamo ka wada Waajid + Sawirro
Wasiirka cadaaladda Soomaaliya oo kulamo ka wada Waajid + Sawirro
Dhalinyarada ayaa wasiirka la wadaagay in baahida ugu weyn oo ay qabaan ay tahay inay helaan Amaan iyo xarumo ay waxkubartaan si ay jiilka iyaga la mid ah wax u la qaybsadaan, iyaga oo muujiyay in aysan wax niyad jab ah ku hayn caqabada ay kala kulmayaan Maleeshiyada Al-Shabaab.
Wasiirka Caddaalada Soomaaliya Cabdulqaadir Maxamed Nuur, ayaa dhalinyarada u sheegay in marnaba ay cabsi galin culeeska argagixisada isaga oo kula dardaarmaya in muhiimada ay saaraan waxbarashada oo fure u ah mustaqbalka qof waliba oo dhalinyara ah.
Sidokale Wasiirka Caddaalada iyo gudoomiyaha degmada waajid ayaa la kulmay odaasha dhaqanka kulankaas oo si weyn loogu soo hadal qaaday caqabadaha haysta shacabka degmada ku nool iyo sidii loogu furi lahaa wadooyinka u xeran Al -Shabab si ay u soo laabato Nolosha iyo hormarka bulshada waajid.
Markiii uu kulankaas soo dhammaaday ayaa waxaa warbaahinta qaranka la hadaly qaar kamid ah odaayaasha dhaqanka ee kulanka la qaatay wasiirka.
Wasiirka Caddaalada oo maalmahaan ku sugan degmada waajid ayaa kulamo gooni gooni ah la lahaa shacabka iyo maamulka degmada waajid ee gobolka Bakool.
Previous articleKooxo hubeysan oo saaka haweeney ku dilay magaalada Muqdisho